Nagu saabsan - Zhejiang Baolai Group Co., Ltd.
Zhejiang Baolai Group Co., Ltd. (Nooca: Glazzy) wuxuu ku takhasusay muraayadaha wax soo saarka in ka badan 20 sano. Shirkaddayadu waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ganacsiga indho-sarcaadka ee Shiinaha, oo xarunteedu tahay Shiinaha aagga ugu weyn ee lagu sameeyo indha-sarcaadka - Taizhou Linhai
Waxaan soo saari karnaa nooc kasta oo muraayadaha indhaha ah oo keliya marka laga reebo muraayadaha indhaha, khadkeenna ugu weyn ee wax soo saarka waxaa ka mid ah: Muraayadaha indhaha, muraayadaha indhaha, muraayadaha akhriska, muraayadaha indhaha ee Sport, muraayadaha Acetate, iwm ... Waxaan la shaqeyneynaa Disney, Walmart, CocaCola, Unilever , Lipton iwm ..... Waxaan ku tusi karnaa dhammaan xisaabinta qaraabada ee tixraaca ah haddii aad u baahato. In ku dhow 8 sano dhoofinta waayo-aragnimo, waxaan dhisey waaxda iibka tartan iyo xirfadle xoog leh, koox naqshad xirfad leh, kooxda mas'uulka ka ah QC / QA.
Dhammaanteen waxaan leenahay hal ujeedo: inaan siino alaabada ugu fiican dhammaan macaamiisheenna qurxoon. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo tayo sare leh, alaab qiimo jaban oo macquul ah iyo naqshado casri ah, waxaan leenahay tartan xoog leh oo ka socda suuqeenna. Waxaan sidoo kale diirada saareynaa xakameynta tayada, adeegyada macaamiisha, bixinta waqtiga oo waxaan u qaadaneynaa arimahan sida ugu weyn ee kor loogu qaadayo awooda tartanka ee suuqa adduunka. In la abuuro qiimaha ugu badan ee macaamiisheena waa baacsigayaga joogtada ah. Ku soo dhowow inaad soo booqato warshaddeenna. Waxaan rajeynaynaa inaan fursad u helno inaan dhisno xiriir ganacsi oo aan kula yeelanno isla markaana aan ku dhisno iskaashi muddada-dheer ah.